Ungakuthola kanjani futhi uhlale ukhuthazekile | Bezzia
USusana Garcia | 06/06/2021 18:00 | I-Psychology, Psychology nezithandani
La Isikhuthazo yilokho okusiholela ekwenzeni izinto, ukufeza izinhloso zethu noma ngabe zikude kakhulu. Isisusa singadingeka ezintweni eziningi, kusukela ekukhuphukeni intaba kuya ekufundeni noma ukuya emsebenzini ngentshiseko nsuku zonke. Ukugqugquzela kuyingxenye yempilo yethu kepha ngeke sikwazi ukuyigcina njalo, ngoba idinga umzamo. Kungakho-ke kunabantu okuthi uma bephelelwe wumdlandla, bayeke ukulandela izinhloso zabo.
Kubalulekile funda ukuthola nokuhlala uzimisele ngokuhamba kwesikhathi ukuze sikwazi ukufika lapho sifuna ukuya khona. Leyo drayivu isisiza nsuku zonke futhi isigcina sisebenza ukuze sikwazi ukufeza imisebenzi nezinto ezinzima kithina. Le nkuthazo iguqula indlela yethu yokwenza futhi iyisikhuthazo sokufeza lokho esikufunayo.
1 Hlela impilo yakho
2 Yenza imisebenzi enzima yenziwe ngokushesha
3 Cacisa ngezinhloso
4 Thatha amakhefu akho
5 Ungaziqhathanisi nabanye
Hlela impilo yakho
Kunzima thola umdlandla wokwenza izinto uma singenayo inhlangano futhi siduka ngemininingwane. Ukuba nezinto ezicace bha kuyinto eyisisekelo ngoba kusisiza kakhulu ukuthi sazi ukuthi inhloso ikuphi futhi kusisiza nokuthi sibone intuthuko. Ukubona ukuthi sithuthuka kanjani ekufezeni izinhloso zethu kuyadingeka kakhulu ngoba ngaleyo ndlela sihlala sigcina ugqozi luphezulu, ngoba sibona imiphumela. Ukuhlelwa kwanoma iyiphi inhloso noma umsebenzi kungasiza kakhulu ngoba ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi sikuphi nokuthi yini okufanele siyenze ukufeza izinhloso kancane kancane.
Yenza imisebenzi enzima yenziwe ngokushesha
Uma ungakhetha ukuthi imiphi imisebenzi okufanele uyenze kuqala, kufanele ukhethe leyo enzima kakhulu kuwe kuqala, ngoba ekuqaleni kulapho ugqozi luphakeme futhi unamandla amaningi ukufeza izinhloso zakho. Ngakho-ke lapho kade wenza imisebenzi okwesikhashana, kuzosala elula kuphela, okuthile okuzokuvumela ukuthi uhambisane nejubane lokuqeda okufanele ukwenze. Akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi ukukhetha imisebenzi eyenziwayo kepha akufanele sishiye labo esibathanda okungenani kuze kube sekugcineni ngoba sengozini yokulahlekelwa inzalo noma isifiso, okungukuthi, isisusa sokuyenza.
Ukwazi lokho esifuna ukukufeza nokuhlala sikukhumbula kungasisiza sigcine umdlandla ungehli. Kulula ukuthi ngokuhamba kwesikhathi Masilahle umbono futhi singaboni ukuthi kusithathaphi esikwenzayo. Kungakho ngalezo zikhathi kumele sime sicabange ngomgomo wokugcina. Thumela le nhloso ebhodini noma kwenye indawo ungayibona kalula ukuze ugcine ugqozi lwakho luphezulu.
Thatha amakhefu akho
Akunakwenzeka ukwenza imisebenzi kahle uma sikhathele. Ukwazi ukuthi ungahlala kanjani ukhuthazekile futhi usebenze kubalulekile njengokwazi ukuthi ungama kanjani lapho sikhathele. Ukuphumula kuyadingeka kakhulu kunoma yimuphi umsebenzi. Umzimba wethu kufanele uphumule kanjalo nobuchopho kufanele, okumele ilulame emizameni yokubuyela emsebenzini isebenze kahle. Ngakho-ke kufanele uhlale uzihlonipha izikhathi zakho zokuphumula. Hlela lezi zikhathi futhi uzihloniphe. Ngokungangabazeki uzowubona umehluko ekugcineni, ngoba lokhu kuzokusiza ukuthi uhlale upholile ngokuhamba kwesikhathi.
Uma kukhulunywa ngokufeza izinhloso empilweni, kuyiphutha elikhulu ukuziqhathanisa nabanye, ngoba umuntu ngamunye unendlela yakhe, amandla akhe nobuthakathaka. Kuhle ukugcina engqondweni ukuthi yini esingayizuza, kepha kufanele futhi sishiye ukuqhathanisa kwabanye abantu okungasiisi ndawo, ngoba lokhu kungasiqeda amandla. Ukubona ukuthi omunye umuntu uzuze esikufunayo ngaphambili futhi ngomzamo omncane kungasenza silahlekelwe yisikhuthazo nokuzethemba kithi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ungakuthola kanjani futhi uhlale unogqozi